सुष्माको रेट १० लाख ? – ताजा समाचार
सुष्माको रेट १० लाख ?
सुष्मा कार्की अभिनेत्रीको क्रेज अहिले कस्तो छ ? सुष्मा लाई लिएर फिल्म चल्छ त ? सुष्माको खोजी दर्शकले गर्न छाडिसकेका छन् ।
सुष्मा कार्कीको खबर संचारमाध्यममा कसरी आउँछ भन्दा, कहिले विकिनी लगाउँदा कहिले जन्मदिन मनाउँदा । उनको चर्चा हुन्छ । अरु, बेलामा उनी खासै छाएकी छैनन् । सुष्माले काम गरेर उनको तारिफ भएका फिल्म पनि छैनन् । बरु, उनलाई दर्शकले मन पराएको आइटम नृत्यमा हो । लुटको उध्रेको चोलीले गीतले त सुष्मालाई आइटम गर्लको रुपमा हिट नै बनाइदियो । सुष्माले यस्तो सफलता सिंगै फिल्म खेलेर पनि पाएकी छैनन् ।
अहिले सुष्मा “फटाह फणिन्द्र” भन्ने फिल्म गर्दैछन् । यो फिल्ममा उनले लिएको पारिश्रमिकको हल्लाले अहिले फिल्म बजार गर्माएको छ । उनलाई फिल्मका लागि १० लाख पारिश्रमिक दिएको चर्चा छ । फिल्मको टिमले नै उनलाई १० लाख दिएको भनेर समाचार सार्वजनिक गरिरहेको छ । ती, समाचारलाई सुष्मा आफैले खुशीका साथ शेयर गरिरहेकी छिन् ।
तर, सुष्मालाई १० लाख पारिश्रमिक उनको खस्कदो अवस्थामा कसैले देला भनेर पत्याउने ठाउँ छ होला त ? कि सुष्माले आफ्नो क्रेज छ है भनेर देखाउनै हल्लाको खेल खेल्दैछिन् । सुष्मालाई १० लाख, पत्याउन सकिएला र ?
हेर्नुहोस सुष्माका केही तस्विरहरु
नोट : यहाँ प्रयोग भएका सम्पूर्ण तस्विरहरु सुष्मा कार्कीको फेसबुकबाट लिइएका हुन् ।